BBC-da ayaa ogaatay xadgudubyo ka dhaca xarumo ku yaala Islii | Saxil News Network
BBC-da ayaa ogaatay xadgudubyo ka dhaca xarumo ku yaala Islii
Barnaamijka dabagalka BBC-da ee Afrika Eye ayaa baaritaan uu sameeyay ku ogaaday in goobo arrimaha cilaajka ama daweynta dadka ee Qur’aan saarka oo ka furan xaafadda Islii ay ka dhacaan xag gudubyo lagula koco dadka bukaan ahaanta meelahaas loo geeyo.
Waalidiinta ayaa carruurtooda geeya goobahan si ay u helaan daweyn xagga diinta ah, balse waxaa dadka meesha la geeyo loo geystaa jirdil iyo bahdil kale oo ay ka mid xaalado nololeed oo aad u adag.
Wariyaha baaritaankan sameeyay Jamaal Cusmaan ayaa la kulamay nin lagu magacaabo Ben Njega kaas oo muddo ka shaqaynayay goobahan, islamarkaasna ka duubay muuqaalo qarsoodi ah.
Waxa ay muuqaaladan muujinayaan dadka oo aad loo garaacayo, laguna dhahayo hadalo aan habboonayn.
Waxa ay sidoo kale muujinayaan dad oynaya, oo ay ka muuqato dhibaato adag.
Goobaha dadkan la hayo ayaa waxaa ka muuqda xaalad dayacnaan ah, iyada oo dadka la siiyo daawooyin aanan la ogeyn waxa ay yihiin oo si qasab ah loo cabsiiyo dadka.
Waxa uu sheegay in dadka aysan jirdil ku samaynin, dadkana ay keenaan waalidkood ama ehelkood, qaarkood ay si iskood ah u yimaadaan goobahan.
Balse Ben Njega ayaa yiri “Waxaan arkay dad laga jabiyay gacmaha, qaarkood ayaan isbitaalada geeyay sababtuna ahayd dhaawacyadii jirkooda loo geystay”.
Dadka meesha la keeno ayaa waxaa la sheegay in ay ka midyihiin kuwa qabatimay daroogada iyo maandooriyeyaasha kale, si looga daweeyana loo geeyo meelaha oo loogu magacdaray ‘Dhaqancelin’.
Mudaawaadkan dadka lagu qasbo in ay cabbaan ayaa lagu magacaabaa Xarmala, waxaana dhacda in uu qofka markiiba mantag ka wareego.
Waalidiinta ayaa xarumahan siiya lacag gaaraysa illaa $500 doolar bishii, dadka meesha la geeyayna waxaa ka mid ah wiil lagu magacaabo Maxamed oo 18 jir ah, kaas oo London laga keenay si loo dhaqanceliyo.
Xarumahan qaar ayaa waxaa u dhaca booliiska, waxaana mararka qaar la xiray mulkiilayaasha, balse todobaad kadib dib ayaa loo furaa sida uu ku waramayo Jamaal Cusmaan oo sameeyay dabogalkan